Warbixin ku saabsan Doorasada Midowga Yurub (EU-valet 2014) | Somaliska
25-ka bishaan May waxaa dhacaya doorashada baarlamaanka Midowga Yurub taasoo ka dhici doonta dhamaan wadamada xubnaha ka ah EU-da. Hadaba halkaan waxaan idin kugu soo bandhigayaa warbixin ku saabsan doorashada iyo sida looga qeyb qaadan karo.
Doorashada EU ayaa ah mid aad muhiim u ah maadaama baarlamaanka Midowga Yurub uu yahay mid dejiya qaar badan oo ka mid ah sharciyada looga dhaqmo wadamada Yurub. Sanadkaan ayaa doorashadu qaasatan muhiim tahay maadaama ay jiraan xisbiyo badan oo cunsuri ah kuwaasoo doonaya in ay galaan baarlamaanka Yurub ka dibna ay halkaas ka abuuraan qalalaase. Waxaa aad u muhiim ah in laga qeyb qaato doorashada oo loo codeeyo xisbiyada u wanaagsan soo galootiga iyo guud ahaan danta wadanka Sweden.
Baarlamaanka Yurub ayaa ka kooban 751 xubnood oo ka soo jeeda 28 wadan. Wadanka Germany ayaa ugu xubno badan oo ay u fadhiyaan 96 xildhibaan. Sweden ayaa baarlamaanka waxaa ugu jira 20 xubnood. Tirada xubnaha wadankasta ku yeelanaya baarlamaanka waxay ku xirantahay tirada shacabka wadankaas.
Sharciyada uu dajiyo baarlamaanka Yurub ayaa waxaa waajib ah in ay dhaqan galiyaan dahmaan wadamada xubnaha ka ah.
Doorashada ayaa u dhacaysa si la mid ah doorashada baarlaamanka Sweden. Dhamaan dadka ka qeyb gali kara doorashada ayaa loo soo dirayaa warqadii ay ku codeyn lahaayeen, maalinta Axada 25 May ayaad codkaaga dhiibanaysaa goobaha doorashada ama hormaris ayaad u codeyn kartaa. Natiijada ku meel gaarka ah waxay soo baxaysaa isla marka ay dhamaato codeynka.
Doorashada waxaa codka dhiiban kara qofka 18 sano buuxiyay ee haysta dhalashada Sweden ama dhalashada wadan kale oo Yurub ah isla markaana sharci degenaansho ku leh wadanka Sweden. Haddii aad tahay qof haysta dhalashada Sweden oo ku nool wadan kale oo Yurub ah wadankaas ayaad ka codeyn kartaa.
Marka ay doorashadu dhamaato ayaa bisha July 2014 waxaa isku imaan doona dhamaan xildhibaanada la soo doortay. Waxay dooran doonaan afhayeenka baarlamaanka iyo in ay isku qeybiyaan gudiyo. Marka ay madaxda wadamada Yurub ay soo jeediyaan cida noqonaysa gudoomiya European Commission (EC) ayaa baarlamaanku dooran doonaa qofkaas iyo dhamaan cida la shaqaynaysa. Hawsha EU-commission ayaa ah in ay soo jeediyaan sharciyada cusub iyo la socodka sharciyada degsan.
Hadaba haddii aad ka midtahay dadka codeyn kara, ha hilmaamin in aad codkaaga dhiibato maanta ama kama dambays 25 May 2014.
Waan codeyn lahaa hadii Ilaahay ii qabsaneynin maalinta qiyaamaha codeyntaan. balse xitaa maku jirto wadan muslim ah ama umada Islaam ah. arimo u qeyr badan Islaamka loogama hadlo, waxa looga hadlo waa qaarada ay ku magacaabeen dunida sedaxaad sidii loo gumeysan lahaa iyo inta kasoo hartay si toosna waxay u hoos tagaan meesha lagu magacaan caabay UN ka. oo golo Ibliis ah. (SATAN)
hadii aad necebtahay maxaa kasoo doontay wadankood
May 8, 2014 at 12:56
walal Abubakar horta waxad ogaataa inaan dhulkoodii ugu imaanay dadkaan hadana wixii Allah nooga soo qaaday aan ka helnay, markii anagoo og wax walba ayaa hadagii xaanshadooda codeynta kuso qoray sedex nooc oo ah, haa ama maya mida dadka adi camalna waxa loogu so qoray waan ka aamusay, marka adigo og waxa aay yihiin hadana Allah ayaa kuu cabiidiyey noloshaan kaaga soo qaaday, walaalkaa ayaad kasoo carartay oo xabad iyo midi ku laayey umadii soomaaliyeed… sabar intii wadanka Allah nooga xasilinaayo wili bahal ayaa joogee…
suaashu waxay tay dadka waraqa hela uun baa codayn kara miyaa, miyaan dadka qaarkii tegi karin gooba codbixinta? qofka wadanka kucusub macodayn karaa tusaale qofka wadanka joogay wax kayar sanad?
sxb maya macodeen kartid waa inaad baasaboorka weyn heesataa sanad hadaa joogtid oo aad wadan kale oo yurub ah kasoo guurtay toos halkaan ayaad kacodeyn kartaa balse muhiimada waa in aad heesataa baasaboorka weyn ee 8 sano lagu qaato.
Wixii Magaca Jama wata o dhan ma codenayan haday xataa ku dhashen sweden 🙂
Wixii Magaca Jama wata o dhan ma codenayan karan haday xataa ku dhashen sweden 🙂